Ezishibhile Xenical analogues > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Xenical: izifanekisisi zomuthi
I-Xenical ingeyeqembu lezidakamizwa - inhibitors of lipases emathunjini futhi ihloselwe ukwelapha ukukhuluphala. Umuthi unconywa ukuthi usetshenziswe ngabantu abanesisindo esandayo. Lapho kuthathwa amakhompiyutha aqukethe ingxenye ye-orlistat, ama-enzyme ayasebenzi, futhi umzimba uyeka ukudiliza amafutha ekudleni.
Ngakho-ke, iXenical isiza ukunciphisa isisindo somzimba. Isenzo sezinto ezisebenzayo zomuthi senzeka esiswini kanye namathumbu amancane ngaphandle kokufakwa egazini kanye nemiphumela kwezinye izitho zomzimba. Lesi sidakamizwa senziwa eSwitzerland yinkampani yemithi uF. Hoffmann-La Roche Ltd. Intengo ephansi emakhemisi eRussia ama-ruble ayi-1060. I-Xenical ine-analogues eshibhile eyenziwe abakhiqizi baseRussia, abaseJalimane nabaseNdiya.
Umuthi weListat uqukethe i-orchidat esebenzayo, okuyi-inhibitor enamandla ye-lipases esiswini. Umuthi ubekelwe ukwelashwa kokukhuluphala. Ngokusebenzisa njalo umuthi, ukuncipha kwesisindo kanye nokuthuthuka esimweni esivamile seziguli ezinesisindo somzimba ngokweqile ezibhekiswa nesifo sikashukela kuyabhekwa.
Ukuchayeka ezingxenyeni zeListata, i-analogue eshibhile yemithi ye-Xenical, kwenzeka ku-lumen esiswini namathumbu amancane. Umuthi u-inactivates ama-enzymes futhi wehlise amandla okuphula i-triglycerides, okuholela ekunciphiseni kokudla kwekhalori kanye nokunciphisa umzimba.
Iziguli ezinenkinga yokukhuluphala nesifo sikashukela ezithatha i-Listata, i-analogue eshibhile ye-Xenical, zibika ukunciphisa umzimba ngokweqile kunezinye iziguli ezisebenzisa ukudla okwelaphayo.
Umuthi kaListat uvunyelwe kulezi zimo ezilandelayo:
I-malabsorption syndrome engapheli,
Ngesikhathi sokukhulelwa, ukuncelisa ibele, ngaphansi kweminyaka eyi-12, ukuthatha isidakamizwa i-Listat kuphambene!
Imiyalo yokusetshenziswa kwamaSpredishithi, i-analogue yesidakamizwa i-Xenical, ikhombisa irejimenti yemithamo nezincomo ezingeziwe:
Kuthathwa amaphilisi ngokudla ngakunye noma kungakapheli ihora kudliwe.
Umuthi uvunyelwe ukuthi ungadakwa uma izitsha zingenamafutha.
U-Listata, i-analogue yesidakamizwa i-Xenical, ubiza emakhemisi aseRussia kusuka kuma-ruble angama-890.
Umuthi oshibhile u-Orsoten, obambele iXenical, ukhiqizwa ngumenzi waseRussia uKrka-Rus. Kunconywa imishanguzo yokuncipha kwesisindo kubantu abanenkomba yesisindo somzimba ngenhla kwe-28. I-Orsoten iqukethe isakhi se-orlistat, esivimba ukufakwa kwamafutha emgodini wokugaya ukudla. Ama-unsigit triglycerides ngokwemvelo akhululwa emzimbeni.
I-Orsoten, i-analogue eshibhile ye-Xenical, ifakwa umthetho wokuthi kukhona:
ukuzwela okuphezulu kwezinto ezisebenzayo zomuthi,
Umuthi i-Orsoten, i-analogue yomuthi we-Xenical, awunqunyelwe izingane nentsha. Ukuqapha kumele kusetshenziswe kubantu abanokulimala kokusebenza kwezinso, i-hypothyroidism, kanye nesithuthwane.
Njengamanye ama-analogues ama-Xenical, i-Orsoten ingadala imiphumela emibi:
ukwanda kwegesi, uhudo, usizi emgodini wokugaya ukudla,
ukwehla kwezinga le-prothrombin,
imishayo yesikhumba, i-angioedema,
ukuthuthukiswa kwe-cholelithiasis, i-hepatitis.
Uma kwenzeka izehlakalo ezinjalo, kufanele uvakashele udokotela! Izinga lobukhali bazo kuncike enanini lamafutha ekudleni. Kungakho ukwelashwa ne-Orsoten kunconywa ukuthi kunamathele ekudleni okunekhalori ephansi. Uma ngemuva kwezinyanga ezintathu kusukela kuqale umuthi izimpawu ezingemnandi ziqhubeka, kubalulekile ukwazisa lowo onguchwepheshe.
Intengo ye-Orsoten, i-analogue yesidakamizwa i-Xenical, ingama-ruble ayi-712.
I-Xenical ine-analogue engabizi ye-Orlistat, eyenziwe yinkampani yaseNdiya iRanbaxy, inkampani yaseGerman yezemithi iStada. Ivela eqenjini lezidakamizwa elehlisa i-lipid futhi lisetshenziselwa ukukhulupha ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, i-arterial hypertension, i-dyslipidemia.
I-Oralogat Xenical analog ine-lipophilicity ephezulu. Ingxenye esebenzayo ivimba ukungena kwe-triglycerides egazini. Isenzo se-Orlistat siqala odongeni lwamathumbu. Umuthi awubangeli izinguquko ezihlelekile futhi uvame ukubekezelelwa kahle yiziguli.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuncipha okukhulu kwesisindo kwabonwa ngesikhathi sokwelashwa kwe-Orlistat. Umphumela omkhulu wabonwa kubantu abasekela ukudla okunempilo.
I-Orlistat, i-analogue yomuthi i-Xenical, ayikwazi ukusetshenziswa ezimeni ezinjengokuthi:
ukungezwani komzimba ezakhiweni zomuthi,
ukuba khona kwe-malabsorption syndrome,
Ngokunyakaza kwamathumbu okwenziwa njalo, ukuphazamiseka kokulala, isiyezi, uvalo, okuvelile ngenkathi uthatha i-Orlistat, kufanele uthintane nodokotela wakho.
I-Orlistat ishibhile kune-gens Orsoten. Izindleko zayo emakhemisi eRussia angama-ruble angama-472.
I-Xenalten yisidakamizwa esinciphisa i-lipid esithambisa isenzo se-lipase. Umuthi uvimba ukuqhekeka kwamafutha emgodini wokugaya ukudla futhi uholela ekunciphiseni isisindo. I-Xenalten isetshenziswa kokubili ekwelapheni ukukhuluphala kanye nokugcina isisindo somzimba.
Umenzi utusa ukuthi usebenzise ukudla okulinganiselayo ngenani elincane lokudla okunamafutha ngaphambi kokusebenzisa umuthi.
I-Xenalten, i-analogue yesidakamizwa i-Xenical, iyakhonjiswa uma:
ingozi enkulu yokuphindaphindwa kwesisindo,
izifo eziphazamisa ukulahleka kwesisindo (isifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, i-dyslipidemia).
Umuthi kufanele uthathwe ngokuqapha kubantu abane-hyperoxaluria kanye nephrolithiasis.
I-Xenalten, i-analogue eshibhile ye-Xenical, iholela ekunciphiseni kwe-prothrombin uma ithathwa kanyekanye neWarfarin. Umuthi unciphisa ukumuncwa kwezithasiselo ezisebenza ngokusebenza kanye nezinto eziyinkimbinkimbi ze-mulcitamin ze-tocopherols ne-beta-carotene.
Umuthi weXenalten ungadala imiphumela emibi:
ukubonakala kwezitulo ezinamafutha kanye nokukhishwa kwamafutha,
izinhlungu ezihlangene, imilenze ephansi, emuva,
ukungahambi kahle komzimba.
I-Xenalten ishibhile kune-Xenical. Kumakhemisi, umuthi ungathengwa ngama-ruble ayi-630.
IGoldline, eyenziwe yinkampani yaseNdiya iRanbaxy, iyisidakamizwa esiklanyelwe ukulawula isifiso sokudla nokwelashwa okuphezulu. Into esebenzayo i-sibutramine, ekhulisa umuzwa wokugcwala ngokudla, inciphise isidingo sayo, futhi yenyusa ukukhiqizwa okushisayo. IGoldline ikhonjiswa ukusetshenziselwa abantu abanenkinga yokukhuluphala, i-dyslipidemia, nesifo sikashukela i-mellitus.
Imiyalo esetshenzisiwe ikhombisa isikhathi esiphezulu sokuthatha amaphilisi - iminyaka emi-2. Uma kungabikho mphumela kusuka ekusetshenzisweni kweGoldline, i-analogue yesidakamizwa iXenical, kuyadingeka ukumisa ukwelashwa.
Umuthi lo ukhonjelwe kwiziguli ezihlushwa:
ukuzwela kwento esebenzayo
isifo senhliziyo esizalwa naso
IGoldline, i-analogue yesidakamizwa iXenical, ayisetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa, ukuncelisa, ebuntwaneni nasekugugeni. Ekwelapheni ukukhuluphala nomuthi, kuyadingeka ukulawula ukushaya kanye nomfutho wegazi.
IGoldline, i-analogue yesidakamizwa i-Xenical, ibiza ama-ruble ayi-1,164 kumakhemisi aseRussia.
Ngaphambi kokuthatha i-Xenical noma ama-analogues ashibhile, udinga ukubonana nodokotela! Ukulungiselela okuqukethe isakhi se-orlistat kunemiphumela emibi nokuphikisana. Uma i-tachycardia, ukukhathala okwandayo, ukuphazamiseka kokulala, ukukhathazeka, izinhlungu emgodini wokugaya ukudla kuvela ngenkathi uthatha umuthi, yehlisa umthamo bese uthintana nochwepheshe.
Umuthi wenziwa ngefomu lethebhulethi. I-capsule ngayinye iqukethe i-orchidat eyi-120 mg. Ingxenye eyisisekelo yomkhiqizo ivimbela ukufakwa kwamafutha ekudleni kuya emathunjini. Ngenxa yalokhu, ama-triglycerides ngokweqile akhishwa ezindlini.
Izingxenye ezengeziwe zamathebulethi:
I-Xenical isetshenziselwa ukwenza ngokwejwayelekile isisindo somzimba. Amathebulethi asusa ngempumelelo amafutha e-visceral nama-adilocytes ayingxenye ye-hypodermis emzimbeni.
Izinkomba zokusetshenziswa kwe-orlistat ukukhuluphala nezici ezengeziwe zobungozi kwesisindo esengeziwe koshukela abangaxhomekeki ku-insulin. Imvamisa i-Xenical iboniswa ngokweqile, lapho kunesidingo sokungenelela kokuhlinzwa, ngokwesibonelo, nge-oncology.
Umthamo owodwa wezingane ngu-80 mg, kubantu abadala - 120 mg. Amacwecwe athathwa ngokudla kathathu ngosuku. Isikhathi sokwelashwa sinqunywe ngudokotela.
Ukusetshenziswa kwe-Xenical ngesikhathi sokukhulelwa akuvunyelwe, ngoba kuthinta izinqubo ze-metabolic nomsebenzi wesisu. Ucwaningo luphinde futhi luqinisekise ukuthi i-orlistat inobuthi ezinso nasezibindini, ezingaphazamisa ukusebenza kwalezi zitho futhi zibangele i-dystrophy yazo.
I-Xenical ingadala ukusabela okuningana. Lokhu kuphazamiseka kwesitulo, ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo, i-anaphylaxis, isicanucanu, ukuqubuka kwesikhumba, ukugcotshwa kwemvelo, ukugabha, ukungcola kuka-oyile ezinduneni.
Izindleko zeXenical zisuka kuma-ruble angama-927.
Isakhi esiyinhloko samathebhulethi yi-orlistat. Umuthi uvimbela i-lipases esiswini.
Umuthi usetshenziselwa ukwelapha ukukhuluphala futhi njenge-prophylaxis uma kwenzeka ubeka engcupheni yokukhuluphala. Futhi, umuthi usetshenziswa kanye nezidakamizwa ze-hypoclycemic zoshukela, ezihambisana nokugcwala.
Abantu abadala nezingane banqunyelwe ithebhulethi eyi-1 yeLatat ngokudla. Umuthi kufanele uphuzwe kathathu ngosuku. Ukuze ukwelashwa kusebenze, kuhlanganiswa nokudla okunekhalori ephansi.
Ngaphansi kweminyaka eyi-12
U-Listata angavusa ukusabela okungekuhle. Imvamisa lokhu kungukuphakama kwamathumbu esiswini - ukuthopha, ukuthambisa isisu, ukungakhululeki esiswini, nomlomo owomile. Kwesinye isikhathi kuqubuka ikhanda, umkhuhlane, impandla, umalahle, izimpawu zomzimba, izifo zokuphefumula noma ze-urogenital.
Izindleko zamashidi zingama-ruble angama-350.
Amaphilisi we-Orsoten avimbela ukumuncwa kwama-triglycerides emathunjini. Isakhi esiyinhloko salo muthi yi-orlistat, inhibitor ye-pancreatic lipase. Umuthi wephula ama-lipids, angena emzimbeni ngokudla, uvimbele ama-triglycerides ukusabalala emzimbeni wonke.
Inkomba yokuthatha i-Orsoten ukukhuluphala. Ukwelashwa kwenziwa ngokuhambisana nokudla okusho ukuthi ukudla okulinganiselwe kwamafutha, ikakhulukazi imvelaphi yesilwane.
I-Orsoten ithathwa ngesikhathi sokudla main noma ngemuva kokudla, kepha kungakapheli ihora kamuva. Umthamo owodwa wesidakamizwa ngu-120 mg. Udinga ukuthatha amaphilisi ama-3 ngosuku.
Ukuqina nokuvama kokuphendula okungekuhle kuyanda uma i-Orsoten isetshenziswa kanye nokudla okunamafutha. Imiphumela emibi engaba khona:
Ukulimazeka kwamazinyo nomgodi womlomo
Contraindication ukusetshenziswa kwe-Orsoten - ukukhulelwa, ukungabekezelelani ezingxenyeni zomuthi, i-hypothyroidism, ukwehluleka kwezinso. Futhi, umuthi awukwazi ukusetshenziswa ebuntwaneni, nge-lactation, cholestasis, hyperglycemia engalawulwa, isithuthwane.
Izindleko ze-Orsoten zisuka kuma-ruble angama-525.
Umuthi wenziwa emaphaketheni. Iphilisi ngalinye liqukethe i-orchidat eyi-120 mg.
I-Orlistat isetshenziselwa ukwelapha ukukhuluphala nokulungiswa kwesisindo. Ukusebenza kahle kokwelashwa, ukusetshenziswa kwamaphilisi kuhlanganiswa nomsoco ophansi wekhalori.
I-Orlistat idakwa nsuku zonke ngesikhathi sokudla okuyi-3. Umthamo owodwa ngu-120 mg. Akusizi ngalutho ukuphuza umuthi esiswini esingenalutho noma kuhlanganiswe nokudla okunamafutha amaningi, ngoba ikhambi ngeke lisebenze.
I-Contraindication - uphawu lokungangeni okwanele, ukungabekezeleli i-orlistat, ukuqina kwe-bile, vephrolithiasis, hyperoxcaluria.
I-Orlistat ingahle ibangele ukusabela okuhle. Hhayi njalo, kukhona ukwakheka kwegesi okwandayo, i-steatorrhea, isifiso esijwayelekile sokuwohloka, uhudo. Ngokujwayelekile, kubuhlungu nobuhlungu be-epigastric. Ukubonakaliswa kwe-allergic kwesinye isikhathi kuba ngesimo se-anaphylaxis, ukuqubuka kwesikhumba, ukuvuvukala, noma ukulunywa.
Intengo elinganiselwa ku-Orlistat isuka kuma-ruble angama-450.
Umuthi ungukuvimbela kwe-lipases yokugaya ukudla. Isakhi esiyinhloko salo muthi i-orlistat. Abahambeli - i-povidone, i-MCC, isitashi se-sodium carboxymethyl, talc, SDS.
Ama-capsule e-Xenalten anqunyelwe ukukhuluphala ukuguqula isisindo. Ukuthola umphumela wokwelapha, ukusetshenziswa komuthi kuhlangene nokudla kokudla. Futhi, ithuluzi lisetshenziselwa ukunciphisa isisindo ezigulini eziseqenjini lengozi - i-diabetes, hypertension.
Contraindication ngokuthatha i-inhibitor yama-enzymes wesisu:
Ukuhlangana okwenziwe nge-cyclosporine.
Emiphumela emibi yeXenalten ingakhonjwa ukuphazamiseka emathunjini, izifo ezithinta ukuphefumula. Kwesinye isikhathi kuba khona i-migraine, i-dysmenorrhea, ubuthakathaka, umkhuhlane.
Izindleko zeXenalten zisuka kuma-ruble ayi-725.
IGoldline yenziwa ngendlela yamaphilisi. Ingxenye eyisisekelo yalo muthi yi-sibutramine (10 mg).
Isakhi esisebenzayo sisebenza ohlelweni oluphambili lwezinzwa futhi sicindezela umuzwa wokulamba, sidala umuzwa ongathi shu. ISibutramine iphinde inyuse okuqukethwe kwe-cholesterol ezuzisayo egazini, yehlise izinga le-uric acid, LDL ne-triglycerides.
Izinkomba zokuthatha i-Goldline - ukukhuluphala okuyisisekelo okunenkomba engaphezu kwama-30. Futhi, amaphilisi asetshenziselwa ukhulu ngokweqile ngemuva kwesizinda se-dyslipidemia noma isifo sikashukela esinga-insulin.
IGoldline ithathwa kanye ngosuku. Ngokungabekezeleli kahle umuthi, umthamo wehliswa ube ngu-5 mg. Amakhompiyutha anconywe ukuphuza i-sutra ngaphambi noma ngesikhathi sokudla kwasekuseni.
Uma phakathi nenyanga isisindo singanciphile ngo-5%, khona-ke umthamo unganyuswa ube ngamaphilisi we-1.5 ngosuku. Isikhathi sokwelashwa esijwayelekile siyizinsuku ezingama-90, esiphezulu yiminyaka emi-2.
IGoldline inohlu olubanzi lwe-contraindication:
Umsebenzi okhubazekile wenhliziyo
Izifo ze-renal noma ezine-hepatic
Kubukhali ukulandwa kwe-HELL
Izingane kanye nokuguga
I-Goldline enokudla okungalungile noma ukuzwela okukodwa kwe-sibutramine kungadala ukusabela okungekuhle okuningi. Lokhu ukwephulwa kohlelo lwezinzwa oluyinhloko, inhliziyo, ukugaya kanye namaseli emithambo yegazi. Ukusabela kokugonywa kungenzeka futhi, futhi iziguli ezinokugula kwengqondo zingahle zibe nokukhubazeka kwengqondo okucindezelekile, ukudangala, kanye nokungasebenzi.
I-Xenical iyi-inhibitor enamandla. Isithako esisebenzayo yi-Orlistat. Inomphumela onenzuzo kuma-lipases we-gastrointestinal lipases. Inqubo yokuhlukanisa amafutha iyema, futhi ayingenwa emzimbeni. Lokhu kuholela ekunciphiseni okungenakugwenywa kwesisindo sesineke.
Izifundo zamafutha endle zathola ukuthi umuthi okukhulunywa ngawo uqala ukusebenza ngemuva kwezinsuku eziyi-1-2 ngemuva kokuwusebenzisa. Ukuyekiswa kokwelashwa kubuyisela okuqukethwe wangaphambilini kwamafutha ezinduneni ngemuva kwezinsuku ezingama-2-3.
Imiphumela emibi engemihle
Ngendlela yezinqubo ezingezinhle ngesikhathi sokwelashwa, izinkinga ngohlelo lokugaya ukudla kungenzeka. Imvamisa yokunyakaza kwamathumbu inyuka, indle ingathola ifomu eliwuketshezi elinokuqukethwe okunamafutha amaningi. Okuncane kakhulu umuzwa wokungakhululeki esiswini, ukuqhuma kwawo. Iziguli ze-Hypersensitive kulo muthi zinokungezwani komzimba ngezindlela ezahlukahlukene - kusuka ekuthini kungalimali komzimba wonke lapho kuvela ukusongela kwe-anaphylactic okusongela impilo.
Ungayisebenzisa kanjani i-Xenical:
- Abadala nezingane ezingaphezu kweminyaka eyi-12 banconywa ukuthi baphuze i-1 capsule (i-120 mg) ngesikhathi sokudla ngakunye noma kungakapheli ihora emva kwalokho. Lokhu kwenza ukuthi kuvikeleke umzimba ukuthi ungangeni emafutheni.
- Kubalulekile ukusabalalisa inani lemikhiqizo, okungukuthi ngokuqanjwa - amafutha, amaprotheni kanye nama-carbohydrate kuzo zonke izidlo ezintathu ngosuku.
- Umthamo ofanayo ezigulini ezihlanganisa ukwelashwa neminye imishanguzo - i-metformin, i-insulin, kanye nokudla okusekelwe ekushodweni kwekhalori.
- Uma isiguli ngasiphi isizathu siphuthelwa isidlo, noma ukudla kungenamafutha, i-Xenical akufanele isetshenziswe.
Ukusabela komzimba kwe-overdose
Ucwaningo luthole ukuthi ukusetshenziswa kaningi komuthi we-400 mg kathathu ngosuku nge-crescent akuzange kubangele zimpawu ezinzima ezigulini.
Uma kwenzeka kwanda ngengozi noma ngamabomu umthamo - ukubonakaliswa okungafuneki kuhlukile kunhlobo olunconyiwe. Kodwa-ke, uma kwenzeka kunokweqisa, kuyadingeka ukwenza ukubhekwa kwezokwelapha usuku lonke.
Ngabe ngidinga ukubonisana nodokotela ngaphambi kokukuthatha?
Abantu abaningi abangawuthandi umzimba wabo ngenxa yesilinganiso esithile sesisindo ngokweqile, bafuna ukuthola izindlela ezahlukahlukene zokunciphisa umzimba ngokushesha. Kwesinye isikhathi isisombululo esifanele sabantu abakhuluphele singamaphilisi ama-Xenical. Kodwa-ke, zenqatshelwe ngokuphelele ukuphuza ngaphandle kokunconywa ngudokotela. Lokhu kungenxa yokuthi izifo ezikhona zingase zibe zimbi kakhulu ngenkathi kulawulwa amaphilisi. Noma yiziphi izifo ezihambisana nokusebenza kokuphazamiseka kwe-renal, uhlelo lwezinhliziyo - ngeke zinikeze inkambo enhle yokulahlekelwa isisindo.
Ukuthola izindlela zokuthenga umuthi, ukubeka impilo yakho engcupheni akukufanele. Udokotela kuphela okufanele anqume ukuthi umuthi ufanelekile yini.
Ukungena neminye imithi
Izinto zokwelapha, ukusebenzisana okungamiswanga ngakho:
Izindlela ezehlukene zokuvimbela inzalo ngomlomo,
- Ngokusetshenziswa kwamavithamini D, E ne-beta-carotene, ukumuncwa kwabo kuyancipha. Ama-multivitamini awathathwa ngaphambi nje kwamahora amabili ngemuva kokuphuza i-Xenical noma ngaphambi kokulala.
- Ukusetshenziswa kanyekanye komuthi okukhulunywa ngakho ngezidakamizwa ezahlukahlukene ezihloselwe isithuthwane kungadala ukubanjwa ngamandla.
- Ukuphathwa ngesikhathi esifanayo kwe-cyclosporin ye-immunosuppressant kanye ne-antiarrhythmic drug Amiodarone - kunciphisa ukusebenza kwabo.
- Ukwelashwa okukodwa okune-Xenical ne-Acarbose akuvunyelwe, ngoba izifundo ezidingekayo zokwenziwa kukhemisi azange zenziwe.
Kubiza malini iXenical: intengo yasokhemisi
Ukuqashelwa ezitolo zezokwelapha - ngokuya ngokuya kadokotela. Izindleko (esizeni se-apteka.ru, eMoscow) ziphezulu kakhulu - kuzodingeka ukhokhe usuka ku-1087 (amakhebuli angama-21 ngephakethe ngalinye) kuya kuma-ruble ayi-1791 (amaphilisi angama-42) womuthi. Ezifundeni, izintengo zemikhiqizo yemithi ziyehluka kancane ngamanani amakhulu.
Uhlu lwama-generator angabizi kakhulu angeniswa futhi olwenziwe eRussia
Ithebula linikezela ngohlu lwama-generics ashibhile womuthi ofundwe:
Ama-Analogs ashibhile kunamathebulethi weXenical Intengo ye-Apteka.ru ku-ruble. Intengo yePiluli.ru kuma-ruble.
EMoscow I-SPb EMoscow I-SPb
I-Leafing (Amapilisi) 939 947 1034 963
I-Orlistat-Akrikhin (Amakhandlela) 906 981 – –
I-Orsoten (Amakhandlela) 765 777 764 710
Okusohlwini - (okuhlukile)
Sebenzisa ukulwa nokukhuluphala kanye nokukhuluphala ngokweqile. Ngokufana, udinga ukulandela indlela yokudla engalunganga ikhalori.
Awukwazi ukuphuza amaphilisi Uhlu olukhona phambi kwe-cholestasis, i-malabsorption, izinkinga ngokubekezelela okujwayelekile kwezinto zalo ezingokwemvelo. Akunconyelwe abesifazane abakhulelwe nalabo abancelisa izingane. Lokhu kungenxa yokuntuleka kwemininingwane eqinisekisiwe mayelana nokwelashwa okuphephile.
Ukuthatha lo mkhiqizo wemithi, ngasikhathi sinye kubangela ukusabela okulimazayo komzimba. Okokuqala, izitho zokugaya ziyahlupheka, kukhona uhudo, ubuhlungu besisu, ukuthopha. Ngaphezu kwalokho, ikhanda, izifo zokuphefumula kanye nobuthakathaka obujwayelekile kujwayelekile.
I-Orlistat - (EPoland)
Omunye umuthi ofanayo. Kuyasiza ukukhuluphala, okungukuthi, abantu abanenkomba yokuqina yomzimba noma labo abakhuluphele ngokweqile.
Amaphilisi we-Orlistat awabekelwe izingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi nambili, ene-hypersensitivity ekwakhekeni kwawo, uhlobo olungenakuqhathaniswa nokuqina kwe-malabsorption, izinkinga ngokuhoxiswa kwe-bile, kanye nabesifazane abalindele ingane nokuncelisa.
Imicimbi ejwayelekile ehambisana ngokufana nokusebenza okungazinzile kwephepha lesisu, ngoba ukufakwa kwamafutha okudla kuvinjelwe ngesikhathi sokwelashwa. Babonakala kuhudo, Ubuhlungu be-epigastric. Kungenzeka ukwehla kokungazinzi komzimba, okuthi kumise umzimba izifo ezinhlobonhlobo ezithathelanayo - umkhuhlane, ipheshana lokuphefumula elingaphezulu, uhlelo lomchamo. Imizwa yokukhathazeka, i-migraine, kanye nokuphendula kwendawo - ukuqubuka esikhunjeni somzimba kuvunyelwe. Kwabesifazane, umjikelezo wokuya esikhathini ungaphambuka.
I-Orsoten - (iRussia / iSlovenia)
I-analogue engabizi kakhulu ye-Xenical. Izinkinga ezinkulu zesisindo zibekelwa ukwelashwa isikhathi eside, okungukuthi ukugcwala kobuhlungu nokukhula kwesisindo somzimba.
Akuvunyelwe ukusebenzisa ezigulini ezine-allergies ezintweni ezisebenzayo ze-Orsoten, izifo zohlelo lwe-biliary, abesifazane lapho belungiselela ukuzalwa kwengane noma ngesikhathi sokuncelisa. Abancane abakhishwa.
Inokusabela okuningi okuhambisanayo okuhlobene, yize kushiwo kancane. Zihlotshaniswa neqiniso lokuthi umuthi ususa ngokuqinile amanoni atholakala ekudleni, okuholela ekungasebenzi kahle kwesisu namathumbu - ukuthambisa kanzima kwesitulo, izinhlungu zesisu, izenzo ezivame ukwenziwa zokuphamba. Isikhathi eside sokwelashwa kuvimbela lezi zimo.
Ngizokutshela i-analogue eshibhile yeXenical. Ngizamile uXenical uqobo, futhi i-analogue yayo - yini esiza kangcono? Unganciphisa kangakanani isisindo kuma-Xenical ngenyanga.
I-Xenical umuthi ukuvimba ukumuncwa kwamafutha. Nanti iphupho elibekwe samuntu kubo bonke abakhubazekile (mina uqobo ngangiyilokho okuncane): yidla ukudla okunamafutha, futhi ungangcono kukho. Futhi lokhu akuwona nje umnyakazo wokukhangisa, into esebenzayo yeXenical empeleni ayikuvumeli ukuthi amafutha angeniswe.
Kuyiqiniso, amafutha angafakwanga awashabalali, futhi ulungele iqiniso lokuthi ngemuva kokuqothulwa kwekhompiyutha ngayinye yama-Xenical, amafutha angatholakali azophuma namalondolo. Eqinisweni, akukho lutho olubi kangako ngalokhu, noma empeleni kuyinto engathandeki. Cishe konke ukubuyekezwa okuphathelene nocenical kunikelwe lo mphumela wecala, kodwa angizukubhala kakhulu ngakho: ngombono wami, umphumela omangalisayo wokuphindaphindwe kobuhlanga ubuka konke ukungahambi kahle kwawo.
Uzakwethu ongabizi ku-Xenical - lo ngu-Orsoten. Kubiza isikhathi esisodwa nesigamu eshibhile, kepha kwithebhulethi elilodwa le-Orsoten into esebenzayo incane kancane. Ngokusebenza, zombili lezi zidakamizwa zilungile, angibonanga umehluko. Ngakho-ke, ngicabanga ukuthi kunenzuzo enkulu ukuthenga i-Orsoten (elula, hhayi “encanyana”). Kepha kubantu abaningi abakhuluphele, nge-imt ngenhla 35, i-Xenical isengcono.
Ngathatha uXenical, kwathi u-Orsoten izinyanga ezimbili. Izibhebhe ezintathu ngosuku, ngokudla ngakunye. Wehle kahle emzimbeni, ingqikithi yamakhilogremu ayishumi nanhlanu. KODWA Muva nje, bengidla ngokudla okuqinile, ikakhulukazi, ekudleni kwaseJapan. Ngenkathi ngidla ukudla, angiphuzanga umuthi. Ngakho-ke ukubaluleka kokuncipha kwami ​​kwesisindo akuwona amaphilisi kuphela, kodwa iqiniso lokuthi ngikwazi ukuzidonsela ndawonye futhi ngahlala ekudleni kwamaprotheni. Futhi amaphilisi ayenjengetshe elinyukayo ukuze wehlise isisindo.